Xaalad cakirnaan ah oo weli ka taagan Beerta Nabada ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Xaalad cakirnaan ah oo weli ka taagan Beerta Nabada ee magaalada Muqdisho
Waxaa xaalad cakirnaan ah ay weli ka taagan tahay Beerta Nabada ee magaalada Muqdisho, taas oo u dhaxeeysa ganacsatadda beertaasi iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed.
Xaaladaan cakiran ayaa timid, kadib markii guddoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed uu amar ku bixiyay in si lacag la’aan ah lagu galo beertaasi, halkaas oo ay maamulaan ganacsato maalgelin ku sameeyay.
Ganacsatada Beerta Nabada ayaa goobtaasi kala wareegay maamulkii hore ee gobolka Banaadir, waxayna kadib dayactir baahsan ku sameeyeen halkaas.
Dhinaca kale, labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay in beertaasi albaabada loo furay, islamarkaana ay si bilaash ah ku galayeen dadka shacabka ah, taasoo qas iyo jahwareer dhalisay, kadib markii dad badan kusoo jabeen.
Dhibta ugu weyn ee beertaasi ka dhacday ayaa ahayd, kadib markii koox ciyaalo suuq ah ay damceen inay galaan beertaasi, balse markii loo diiday ay weerar dhagxaan ah halkaasi ku qaadeen, taasoo xaaladii amniga qalqal gelisay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa haatan socdo dadaal aad u xoogan oo lagu dhex-dhexaadinaayo guddoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed iyo ganacsatada Beerta Nabada.